Tao anatin’ny roa volana: jiolahy 5 maty, 417naiditra am-ponja, sarona ny kalach, P.A ary grenady | NewsMada
Tao anatin’ny roa volana: jiolahy 5 maty, 417naiditra am-ponja, sarona ny kalach, P.A ary grenady
Nahitam-bokany ny hetsiky ny polisy teto an-drenivohitra na teo aza ny fanafihana nahafatesana olona toy ny teny Andraisoro. Jiolahy dimy ihany koa matin’izy ireo, miaraka amin’ny fitaovam-piadiana mahery vaika maromaro…
“Asan-jiolahy 16 niseho, efatra voasoroka, jiolahy dimy matin’ny polisy. Nahatrarana basy Kalachnikov iray, P.A iray, P.A vita gasy iray, grenady iray ary fanamiana mpitandro filaminana tamin’izany. Olona 29 nisazy raha 417 ny naiditra am-ponja vonjimaika”, hoy ny fanazavan’ny talen’ny filaminam-bahoaka, ny komisera Rakotoarimanana Herilanto. Nandritra ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety, nanazavan’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny mpitandro filaminana fa hetsika nataon’ny polisy ny volana jona nankaty no nahazoana ireo vokatra ireo. “Polisy arivo teo no nahetsika teto an-dRenivohitra sy ny manodidina, ka taratsin’ady 545 tonga teny anivon’ny polisy. Hitohy hatrany ny hetsika ary manaparitaka ny laharana vonjitaitra isaky ny boriborintany izahay”, hoy hatrany ny fanazavana.
Nilaza ireto tompon’andraikitra ireo fa olana matetika ny fahataran’ny antso tonga eny anivon’ny polisy ka mahatonga ny asan-jiolahy tanteraka. Ohatra tamin’izany ny niseho teny Andraisoro ny talata hariva teo, ka nahafatesana mpivaro-boanjo. Notafihina fito lahy ny toeram-pivarotana iray, izay nampitaraina ny olona ny fahataran’ny polisy tonga teny an-toerana. “Taraiky be ny antso tonga tamin’ny polisy. Efa nahavita ny asa ratsiny ny jiolahy vao tonga izahay. Mandeha ny famotorana momba ity tranga ity”, hoy ny polisy andaniny.
Misy mpitandro filaminana
Niaiky ireto nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety fa misy tokoa ny mpitandro filaminana tafiditra amin’ny asan-jiolahy. “Rehefa misy ny polisy tafiditra amin’izany, handraisana fepetra henjana ary tsy ekena izany. Misy ny efa tratra ary misy ny mbola hanaovana famotorana”, hoy izy ireo. Ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo izay fampiasan’ny mpitandro filaminana avokoa, ankoatra ny fanamiana.
Nilaza izy ireo fa miantso ny distrika sy ny sefom-pokontany mba hanara-maso ny olona mivoaka sy miditra amin’ny fokontany. “Fotoam-pialan-tsasatra izao ka tokony hanao fanambaram-bahiny ny olona. Misy amin’izy ireny ny olon-dratsy ka anjaran’ny olona ny mampandre ny polisy raha misy ny ahiahy”, hoy ny fanamafisana.
Araka izany, miandry vokatra ny rehetra satria mahatsapa fa miverina ny fanafihana etsy sy eroa, taorian’ny tranga farany teny Andraisoro namoizana ain’olona ity.